MALAIMBANDY-MAHABO : Olona fito indray nataon’ny dahalo takalon’aina
Nifanesy ny fanafihan-dahalo sy fakana an-keriny tany amin’ny Kaominina Malaimbandy Distrikan’i Mahabo ny faran’ny herinandro teo sy ny voalohan’ny herinandro. 21 décembre 2017
Vola mitentina 5 tapitrisa ariary hatramin’ny 15 tapitrisa ariary ny onitra takian’ireo olon-dratsy amin’ny fianakavian’ireo lasibatra. Telo mianadahy nalain’ireo malaso an-keriny tamin’ny tokantrano iray tao amin’ny Fokontany Antaniketsa, kaominina ambanivohitr’i Malaimbandy, ny zoma alina hifoha sabotsy lasa teo. Voalaza fa 13 taona ny farany kely indrindra tamin’izy telo mianadahy ireo ary tokony hiatrika fanadinana, ny alatsinainy teo.
Jiolahy 7 nirongo basy sy famaky no nanafika tokantrano iray tao an-toerana. Rehefa tafiditra ny trano izy ireo avy dia nandaroka tamin’ny famaky ny lohan’ilay raim-pianakaviana. Naratra mafy ity farany fa ireo zanany telo mianadahy kosa noentin’izy ireo natao takalon’aina, araka ny fampitam-baovao. Nialoha ny nandehanan’ireo dahalo dia nitaky vola 5 tapitrisa ariary tamin’io raim-pianakaviana io izy vao mahita ireo zanany indray. Voalaza ihany fa 5 metatra miala ny tobin’ny zandary no nisy io tokan trano voatafika io. Noentina notsaboina ao amin’ny Hopitaly ao Morondava ity lehilahy voakapa famaky ity ary mbola manaraka fitsaboana ao an-toerana izy io hatramin’izao ora nanoratanay izao, raha ny vaovao farany azo.
Tao amin’ny Fokontany Mangatsa Doany ny fotoana nomen’ireo dahalo ny fianakavian’izy telo mianadahy natao takalon’aina hanaterana ny vola 5 tapitrisa ariary. Alahady hariva lasa teo no natolotra ireo malaso ny vola ka avotra soa aman-tsara izy telo ary efa tafaverina amin’ny fianakaviany. Ankoatra izany dia ny alahady alina hifoha alatsinainy, voatafika ihany koa ny tokantranon’ny lehilahy iray antsoina hoe Zaka ary olona telo no lasa nataon’ny dahalo takalon’aina. Mbola tao amin’ny Kaominina Malaimbandy ihany no nitrangan’izany, ka vola mitentina 15 tapitrisa ariary indray koa no takian’ireo mpaka an-keriny amin’ny fianakavian’ ireto farany, araka ny tatitra voaray avy any an-toerana.
Voalaza fa ao amin’ny Fokontany Betavoahangy 15 kilaometatra miala an’i Malaimbandy ny fotoana nomen’ireo dahalo ny fianakavian’ny niharam-boina. Kinanjo ny alatsinainy vao mangiran-dratsy indray dia nidiran’ny dahalo efa-dahy tao amin’ny Fokontany Ambohiboka, kaominina Malaimbandy ihany ka olona iray lasa takalon’aina tao an-toerana. Nandritra ny fotoana nandosiran’ireo malaso dia nifandona tamin’ireo jama sy fianakavian’ilay olona telo lasan’ny dahalo an-keriny handeha hifampiraharaha ireto farany ka raikitra ny fifampitifirana. Votsotra teny am-pelantanan’izy ireo ny lehilahy iray natao takalon’aina ary dahalo roa voatifitra ka naratra mafy.
Nahatratrarana basy kalacknikov 1 sy basim-borona 1 tamin’ireo roalahy voatifitra ; tafaporitsaka ihany anefa izy ireo, araka ny vaovao voaray. Talata alina farany nisy fandraisan’ny fianakaviany olona telo nalaina an-keriny tamin’ireo dahalo mitazona azy ireo, niady varotra 10 tapitrisa ariary ireo niharam-boina saingy hatreto mbola tsy fantatra na nanaiky izany ireo olon-dratsy na tsia. Voalaza fa lany ny omby any amin’ny Kaominina Malaimbandy mahatonga ireo dahalo niova paikady tahaka izao indray.